कोरोनाले उदाङ्गिएको नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली कोरोनाले उदाङ्गिएको नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली
महेन्द्र प्रसाद भण्डारी- अहिले कोरोना माहामारीले बिश्वनै भयभीत भएकोअवस्था रहिरहँदा नेपालमा पनि यसलेनिकै नाजुक अवस्था सिर्जित गरेकोछ । यसले नेपालमा रहेका स्वास्थ्य संरचना कति कमजोर र असक्षम रहेछ भन्ने कुरा हुबहु देखाइदिएको छ । मैले यसो भनिरहदा तपाईंहरुको मनमा विभिन्न प्रश्नहरू उब्जन सक्छन । कोरोना त हालसालैआएको अप्रत्यासित माहामारी हो, देशलाई यसको परिणामबारे अग्रिम जानकारी कसरी हुन्छ ? स्वास्थ्य संरचनासँग तुलना गर्न कसरी मिल््छ ? यी सबै प्रश्नहरुको उत्तर खोज्ने र आफुलाइ लागेका कुराहरु व्यक्त गर्ने प्रयास गरेको छु ।
माहामारी अहिले मात्र भने पक्कै पनि आएको होइन । विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न माहामारीहरु आइरहेका हुन्छन । मानव सभ्यताले विभित्र माहामारीहरु परास्त गरेर यो अवस्थासम्म आइपुगेको हो । सन् ५४१–७५० मा देखिएको Justinian Plague ले हाराहारी ३ करोड मानवको ज्यान लिएको थियो जुन त्यो बेला युरोपको आधा जति जनसंख्या हो । सन् ७३५–७३७ मा देखिएको Japanese small pox ले पनि २० लाख मान्छेको ज्यान लिएको थियो जुन त्यसबेला जापानको १/३ जनसंख्या थियो । संसारमा देखिएको अर्को माहामारी The Great Plague of Marseille (सन १७२०) ले पनि झन्डै एक लाख मान्छेको ज्यान लिएको थियो । सन्१८१७–१८२० मा भारतबाट फैलिएको हैजाले पनि बिश्व नै त्रसित पारेकोथियो । प्रथम बिश्व युद्ध सकिएपछि सुरु भएको माहामारी Spanish Flue (सन्१९१८–१९२०) ले पनि पाँच करोडको हाराहारीमा मान्छेको ज्यान लिएको थियो । सन् २००३ मा आएको SARS, सन् २००९ मा आएको Swine flue ले पनि थुप्रै मानिसहरुलाइ दुःख दिएको थियो । हामीले अस्ति भर्खर देखिएको Ebola ले पनि सन् २०१४– २०१६ सम्म निकै डर फैलाएको थियो । इबोला बाट पनि झण्डै एघार हजार भन्दा बढी मान्छेले ज्यान गुमाउन परेको थियो । सन् १९८० पछाडी देखिएको HIV/AIDS ले अहिले सम्म तीन करोड मान्छेको ज्यान लिएको छ । यस्तै, अहिले देखिएको कोरोनाले पनि १६ करोड भन्दा बढी मानिसलाई संक्रमित बनाएको छ भने३० लाख भन्दा बढी मान्छेको मृत्यु भैसकेको छ तर यसो भन्दै गर्दा यो सँधै नियन्त्रण बाहिर हुन्छ भन्ने होइन । केही महिना, केही बर्षपछि कोरोना भाइरस पक्कै पनि मत्थर हुँदै जानेछ । त्यसैले माहामारी भनेकै अप्रत्यासित रुपमा आउने हो र संसार जनसुकै बेलामा जुनसुकै माहामारीको चपेटामा पर्न सक्छ । यसरी हेर्दा संसारले नै स्वास्थ्य प्रणाली सुधार गरेर यसरी अपर्झट आइपर्नेमाहामारीको सामना गर्न सधँै तत्पर रहिरहनुपर्छ नत्र भने संसार अर्को माहामारीको फन्दामा पर्ने कुरा इतिहासले नै प्रष्ट पारेको छ।
नेपालमा कोरोनाको बर्तमान अवस्था हेर्ने हो भने दयनीय र कहालीलाग्दोछ । २०१९ कोडिसेम्बर मा चिनको वुहानमा देखिएको कोरोना भाइरस नेपालमा २३ जनवरी २०२० मा चिनबाट फर्किएका एक विद्यार्थीमा देखिएको थियो । त्यसपछि चार–पाँच सय केस सन् २०२० को मार्च महिनासम्म देखिएका थिए । बिस्तारै सङ्क्रमण संख्या बढ्दै गयो । नेपालले कोरोना नियन्त्रणमा बन्दाबन्दी ( Lockdown) बाहेक खासैकेही गर्न सकेन । नेपालका प्रधानमन्त्रीले गैह्र जिम्मेवारीपूर्ण र हास्यास्पद अभिव्यक्ती दिदै हिँडे । कोरोना आछ्यिुगरेर उडाउने, कुपोषण ग्रसित नेपालीको रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढी छ भन्ने जस्ता भ्रम छरीरहे । पहिलो कोरोनाको लहरलेकयां नेपालीहरुले ज्यान गुमाए । पहिलो लहरपछि मानिसहरु सामान्य अवस्थामा आउन के लागेका थिए दोस्रो लहरले नेपालको अवस्था झन्भताभुङ्ग भएको छ । कतिले बेड नपाएर छट्पटाइरहेका छन् भने कतिपय मानिसहरु अक्सिजनको अभावमा मर्न बाध्य छन् । कति आफ्नो परिवारको लागि अक्सिजन खोज्न भौतारिरहेका छन भनेअस्पतालहरुले अक्सिजन उपलब्ध नहुँदा उपचार गर्न नसकिने कुराको सुचना टाँसिरहेका छन । न त प्रधानमन्त्रीले भनेको जस्तै आछ्उि गरेर कोरोना उड्यो न त नेपालीको रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढी देखियो आखिर मृत्युको सैयामा छट्पटाउन त त्यहि निमुखा जनतालाई नै परिरहेकोछ ।
दोस्रो लहरले नेपालमा यस्तो अवस्था बनाउनमा वर्तमान सरकारको जनताप्रतिको गैह–जिम्मेवारीपन, निर्णयशक्तिको असमक्षता र स्वार्थिय राजनिति प्रमुख कारक बनेको छ । पहिलो लहर सकिएपछि दोस्रो लहर आउँछ भन्ने जानकार हुदाहुँदै पनि सरकार कानमा तेल हालेर बस्यो । भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहरले निकै क्षति गरिरहेकोर यो कोरोनाको नँया म्युटेन्ट निकै घातक छ भन्ने जान्दा–जान्दै पनि सरकारले नजरअन्दाज गरिरह्यो। राजनीतिक तरङ्गहरु थुप्रै आए तर स्वास्थ्य प्रणाली सुधार गर्न नेपाल सरकारले कुनैचासो देखाएन । संसद्विघटन भयो, सर्वोच्च अदालतले विघटन खारेज गर्यो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्यो, थुप्रै आन्दोलन, यालीहरु भइरहे तर सरकारको स्वास्थ्यप्रतीको दायित्व सँधै ओझेलमा नै प¥यो। नेकपाको किचलोमा सिङ्गो नेपाल नै फसिरह्यो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा आन्तरिक विवाद यति बढ्यो कि देशले कोरोनाको दोस्रो लहरको तयारी गर्नु पर्छ भन्ने सामान्य हेक्का समेत सरकारलेराखेन । भारतजस्तो
श्रोत–साधन प्रशस्त भएको देशमा त्यस्तो त्रसित स्थिति सिर्जना भयो भने नेपालमा कस्तो परिणाम होला भनेर बुझ्न समेत फुर्सद भएन । नेपाल सरकारले दोस्रो लहर आएको खण्डमा नियन्त्रण कसरी गर्ने, देशमा स्वास्थ्य संरचनाको अवस्था के छ, अक्सिजन कति चाहिन्छ, ब्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने गृहकार्य गर्नतर्फ अग्रसर देखाएन । प्रधानमन्त्री आफ्नै साँख जोगाउन र गुटकै राजनिती गर्न तत्पर देखिए तर माहामारी रोकथामका केही गम्भिर कदम चाल्न सकेनन् । सरकारले दोस्रो लहर आउदा नियन्त्रण, रोकथाम तथा तयारी गर्ने समय प्रशस्त पाएतापनि सरकारलाई जनताको जीवन भन्दा राजनीतिक खेलनै प्यारो लाग्यो । अहिले भयावह स्थितिमा सरकार रमिते बनेर बसिरहेको छ । उपचार नपाएर मरेका जनता सरकारद्वारा गरिएको सामुहिक हत्या हो भन्दा केही फरक पर्दैन । प्रधानमन्त्री विभिन्न बाटो, पुलहरु सम्पन्न नभइ उदघाट्न गर्नमै रमाए तर देशमा एक दुई वटा अक्सिजन प्लान्ट बनाएर उद्घाटन गरौँ भन्ने उनलाई लागेन । भारतका दिल्ली प्रान्तका चिफ मिनिस्टर अर्बिन्द केजरीवालले १००० ICU Bed सहितको अस्पताल उद्घाटन गर्दा नेपालका प्रधानमन्त्रीले ३००० सिटको सनराइज सम्मेलन केन्द्र उदघाट्न गरे । अरु त कुरै छोडाँै अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया CNN सङ्ग कोरोनाको स्थिति नियन्त्रणमा छ भनेर झुटो र लज्जास्पद अन्तरबार्ता दिए ।
अहिले आएको कोरोनाले नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली तोडेर माहामारी भएको भन्दा पनि थोत्रोर निरिह स्वास्थ्य प्रणाली उदाङ्गो बनाइदिएको छ । जनता माहामारीले मरीरहेको बेला रमिते मात्र बनेको सरकारले लाज पचाएको छ । हजारौ श्रद्धाञ्जलीको बिचमा अल्पमतको परेको सरकारले कुर्ची बचाएकोमा बधाई खाइरहेको छ । जनता र देशको सेवा गर्छु भनेर गएका जनप्रतिनिधिहरु पद र दलिय स्वार्थमा लिप्त भइरहेको अवस्थमा नेपालीहरुमा नैराश्यता छाएको छ । अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीलाई बिरामीकोअवस्था बारे सोध्ने हो भने विवस्ताको आँसु गहभरि भरिन्छन्। ऊनीहरु आफ्नै आँखा अगाडी बिरामीले प्राण त्यागेको हेर्न लाचार छन्। गरून्पनि के? आवश्यक श्रोत–साधाबिना बचाउन गाह«ो छ भन्ने राम्ररी बुझ्दाबुझदै पनी आफ्नै ज्यान जोखिममा राखेर दिन रात खटीरहेका छन ।हाम्रै गृह जिल्ला गुल्मीको कुरा गर्ने हो भने जिल्लाले विभित्र कालखण्डमा थुप्रै मन्त्रीहरु पायो तर जिल्ला भरिका अस्पतालले एउटा ICU बेड पनि पाएनन्। अचम्म नपर्नुहोला गुल्मीका अस्पतालमा एउटा ICU बेड पनि छैनन्। बिरामी भएर ICU को आवश्यकता परे ५–६ लाख तिरेर हेलिकोप्टरबाट अरु ठाउँमा उपचार गर्न जानू परेको छ । ५– ६ लाख तिर्ने सामथ्र्य नभएकाहरु उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्नुपरेको छ । अहिलेको अत्याधुनिक युगमा उपचार नपाएर मर्नु भनेको सुन्दा आश्चर्य लाग्छ तर सत्य यहि नै हो । जिल्लाले ठुला–ठुला नेता र मन्त्री दियो तर तिनीहरुले जिल्लालाई एउटा ICU Bed पनि दिन सकेनन्।
कोरोना जस्ता माहामारी आउलान् जालान् त्यो एउटा कुरा रह्यो । यसबाट हामीले के पाठ सिक्ने भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण छ । राज्यको जनताप्रति उत्तरदायित्व के हो ? भ्यु टावरहरु आवश्यकता हुनुकि गुणस्तर अस्पताल ? यो माहामारीमा अस्पताल उद्घाटन गर्ने कि सम्मेलन केन्द्र ? डा. गोविन्द केसी जस्ता व्यक्तिले स्वास्थ्य प्रणाली सुधार गर्न पटक पटक अनसन बसेको कत्तिको सान्दर्भिक रहेछ त ? अहिलेका नेता प्रतिनिधिले यो माहामारिबाट के पाठ सिके त ? अबको कदम कस्तो हुन्छ ? आगामी दिनमा योजना बनाउदा कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने ? यी सब प्रश्न जनताले सरकारलाई सोध्न सक्नुपर्छ ।
अन्ततः मानव समुदायलेजसरी Asian-flue, Plague, Spanish Flue जस्ता घातक माहामारीलाइ त परास्त गरि बिगत भुलेर अगाडि बढ्यो हामी पनि छिट्टै यो कोरोनालाइ उच्च आत्मबलका साथ परास्त गरि अगाडि बढ्नेछौ ।
माया गर्छु भन्न सकिन डराएर हो – गजल
युवा नेता पोखरेलले दिए समाधान सहित अधिबेशन गर्न सकिने ठोस बिकल्प
सम्यक ज्ञानपुञ्ज डा. माधवराज पन्थीप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली- डा. बालकृष्ण चापागाई
बिचौलियाहरुको चंगुलमा एनआरएनए अमेरिका
पत्रकार महासंघ रुपन्देहीको संस्थागत विकासको ऐतिहासिक सन्दर्भ
रुपन्देहीको पत्रकारिता : एक विहङ्गम-दृष्टि